merolagani - अन्डरभ्यालूड शेयर के हो र यो कसरी चिन्ने?
Oct 25, 2020 06:20 PM Merolagani
यदि तपाई केही समयका लागि शेयरमा लगानी गरिरहनु भएको छ भने, तपाईलाई शेयर बजारबाट पैसा कमाउन सहज लाग्न सक्छ । यो एउटा सामान्य कुरा हो, जसमा तपाईले कुनै निश्चित मूल्यमा शेयर किन्नुहुन्छ र त्यसलाई उच्च मूल्यमा बेच्नुहुन्छ ।
तर जब स्टकको मूल्य तपाईले शेयर किनेको मूल्य अर्थात् आधार मूल्यभन्दा तल झर्छ तब तपाई के गर्नुहुन्छ? तपाई शेयर किन्नका लागि सही मूल्य कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई प्रायः हैरान बनाइरहेका हुन्छन् ।
कयौँ पटक केही तर कम लोकप्रिय कम्पनीहरुले प्रत्येक त्रैमासमा आफ्नो विक्री र मुनाफामा सुधार देखाइरहेका हुन्छन् तर तिनीहरुको शेयर मूल्य भने बढ्दैन । यी कम्पनीहरु व्यापारीहरु र लगानीकर्ताहरुको छायाँमा परिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा ती कम्पनीहरुको शेयरले उत्कृष्ट प्रदर्शन अर्थात् उत्कृष्ट सुधारका बाबजुद पनि सस्तो मूल्य पाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले, यदि कुनै कम्पनीले विगत ३ त्रैमासमा २० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हासिल गरेको छ तर शेयर मूल्य सो अनुसार वृद्धि भइरहेको छैन वा उक्त कम्पनीको शेयरमा केबल १ देखि १० प्रतिशतसम्मको मात्र वृद्धि भएको छ भने यो एउटा अन्डरभ्यालूड शेयर हो। प्रायः यस्तो शेयरको मूल्य कम्पनीको मुनाफा र विक्रीको वृद्धिका आधारमा तय गरिन्छ । समय छदैँ जसले यस्तो अन्डरभ्यालूड स्टकको पहिचान गरेर यसमा लगानी गर्छ, उसको वित्तीय नाफा सुनिश्चित हुन्छ ।
लगानीकर्ताहरुले त्यस्ता अन्डरभ्यालूड स्टक चिन्ने ६ वटा आधार अथवा मापदण्डहरु यस्ता रहेका छन्:
कम मूल्य आम्दानी अनुपातः कुनै कम्पनीको हालको शेयर मूल्यलाई वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानीले भाग गरेर मूल्य आम्दानी अनुपातको गणना गरिन्छ । उदाहरणका लागिः कुनै एउटा कम्पनीको शेयर ४० रुपैयाँ प्रतिशेयरमा कारोबार भइरहेको छ र त्यसको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २० गुणा हुन जान्छ । यसैगरी जब कुनै कम्पनीको एउटा शेयर १ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानीका साथ ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने त्यसको मूल्य आम्दानी अनुपात पनि ४० गुणा नै हुन जान्छ । यसको मतलब लगानीकर्ताहरुले एक रुपैयाँ कमाउनका लागि ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ। यद्यपी अन्डरभ्यालूड शेयरमा सामान्यतया मूल्य आम्दानी अनुपात कम हुने गर्दछ ।
लो प्राइस अर्निङ ग्रोथ रेसिया अर्थात् पीईजी रेसियोः पीई रेसियोभन्दा धेरै सही मानिएको पिईजी रेसियो शेयर मूल्य ईपिएस र कम्पनीको अपेक्षित वृद्धि बीच सम्बन्ध देखाउने एउटा मूल्यांकन विधि हो। यो पीई रेसियोलाई अर्निङ ग्रोथ रेटले भाग गरेर निकालिन्छ। यदि रेसियो १ भन्दा कम छ भने लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको विगतको प्रस्तुतिलाई बढी भाउ दिइरहेको बुझिन्छ। तर लगानीकर्ताहरुले होसियारीपूर्वक अनुमानलाई अनुमान कै रुपमा मात्र लिनुपर्छ।
लाभांशले दिने उच्च प्रतिफलः यदि कुनै कम्पनीको लाभांश भुक्तान दर उसको प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा अधिक छ भने लगानीकर्ताहरुले त्यस्तो शेयर बेवास्ता गर्न रुचाउँछन । यसले कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य अन्डरभ्यालूड स्थितिमा पुगेको संकेत दिनसक्छ । विचार गर्नपर्ने कुरा, यदि कुनै कम्पनी वित्तीय रुपमा अस्थिर छैन र भविष्यमा लाभांश भुक्तान गर्ने क्षमता सुरक्षित देखिन्छ भने यस्तोमा कम्पनीको लाभांशले छोटो समयका साथ भविष्यमा पनि प्रतिफल दिनुका साथै शेयर मूल्यलाई उच्चतम स्तरमा लैजाने क्षमता प्रदान गर्न सक्छ। यदि तपाईले स्टक स्किनरको प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने कुनै कम्पनीको अन्डरभ्यालूड शेयर पत्ता लगाउनका लागि ‘लाभांश प्रतिफल प्रतिशतको विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
लो मार्केट टू बुक रेसियोः बजारमा बुक रेसियो एउटा वित्तीय मूल्यांकन विधि हो, जुन कुनै कम्पनीको वर्तमान बजार मूल्यलाई उसको बुक भ्यालूसँग मूल्यांकन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । बजार मूल्य कम्पनीका सबै शेयरहरुको हालको शेयर मूल्य हो। यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर दायित्वमुक्त भएको खण्डमा बाँकी रहेको रकम नै बुक भ्यालू हो।